पार्टी एकता वैशाख ९ मै घोषणा हुन्छ : देवेन्द्र पौडेल | Everest Times UK
भाखा सर्दैसर्दै आएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रबीचको औपचारिक एकता घोषणा आगामी २०७५ वैशाख ९ गतेलाई तोकिएको छ । करिब ६ महिनाअघि सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका दुवै दलले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको महत्वपूर्ण दिनलाई रोजेका हुन् । वैशाख ९ गतेको एकताका लागि संयुक्त कार्यदलहरुले प्रस्ताव गरेका हुन् भने जुन प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन राजनीतिक, सांगठनिक र अन्तरिम विधान कार्यदलले पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाइसकेका छन् । एकता प्रक्रिया लम्बिएकोले ९ गते हुनेमा पनि अझै संशय छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय, पार्टी एकता र समसामयिक राजनीति सम्बन्धमाुराजनीतिक, सांगठनिक कार्यदल सदस्य एवं बागलुङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि टीकाराम तामाङले जिज्ञासा राखेका थिए । प्रस्तुत छ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका सांसद् पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :
पार्टी एकताको भाखा सर्‍यासर्‍यै छ नि ?
सबै कुरा करिब–करिब प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । र, वैशाख ९ गते एउटा ऐतिहासिक दिन, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस, लेनिन दिवस परेको हुँदा त्यही दिनलाई नै हामीले पार्टी एकता गर्ने दिनका रुपमा चयन गरेका छौं । त्यही दिन पार्टी एकता घोषणा हुन्छ ।
विवाद मिलिसक्यो ?
मिलेका विषयलाई सुत्रबद्ध गर्ने गरेका छौं । नमिलेका विषयलाई हामी महाधिवेशनमा गएर छलफल गर्छौं, वैचारिक, राजनीतिक र कतिपय विषयहरु । हाललाई विधान, दुई पार्टीबीच आधारभूत रुपमा बनेका वैचारिक, सांगठनिक, कार्यक्रमिक योजनाहरुलाई मिलाएर अगाडि बढ्छौं ।
दुई पार्टी मिलनपछि तत्कालीन कार्यदिशा के हुन्छ ?
तत्काल हामीले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्छौं । हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ हुन्छ । कार्यक्रमचाहिँ समाजवादी राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने हुनेछ । अहिले हामी आधारभूत तहमा छौं ।
भनेपछि एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको माओवाद छोड्ने अवस्था हो ?
छोड्ने होइन, यी विषयहरु हाम्रा पार्टीका सम्पत्ति हुन् । तर, यी विषयहरुलाई अहिले बहसमा लगेर पार्टी एकता कहीं न कहीं विवादित बनाउनुभन्दा पार्टी एकतालाई टुंग्याएर यी विषयहरुलाई महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी हामी अगाडि बढाउँदैछौं ।
ठूला विषयमा मिलेजस्तो तर ‘जनयुद्ध’, चुनाव चिह्नजस्ता मसिना विषयहरुमा विवाद गरिरहनु भएको छ ?
प्रतिवेदनमा विवाद छैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलन नेपालका परिवर्तनका पृष्ठभूमिहरु हुन् भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौं । विधानको प्रस्तावनामा लेख्ने, नलेख्ने वा समग्रमा अर्कै शब्द जनक्रान्ति लेख्ने कि भन्नेमा छलफल चलेको हो । त्यो पनि हामी टुंग्याउँछौं ।
यी विषय त भए, सांगठनिक संरचनाका सन्दर्भमा यहाँहरुका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बराबरीको हैसियतमा हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, त्यो विषय लागू हुन्छ त ?
जोखेर, तौलेर एकता गर्ने विषय होइन । दुई अलग धारको बीचमा हुन लागेको एकता हो । नेपालमा अरु टुटफुट र छरिएर बसेका वामपन्थीहरुलाई पनि ल्याएर एउटै पार्टीमा गोलबन्द गर्ने गरी एकताको सुरुआत गरिएको हो । त्यसैलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । त्यो ६०÷४० आदि–इत्यादि भन्ने कुरा पहिले चुनावी प्रयोजनको लागि बनाइएको हो । त्यो प्रयोजन सिद्धिइसकेको छ । अहिले अलग अस्तित्वमा रहेका पार्टी भएकोले हामी समान हैसियतमा एकताको कुरा गर्छौं ।
एकता पनि गर्न खोज्ने तर आ–आफ्नो पार्टीको अस्तित्व हराउला कि भन्ने चिन्ता पनि देखियो नेताहरुमा ?
कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यो पार्टी एकता नगर्ने चाहना र महत्वाकांक्षाबाहेक अरु केही पनि होइन । सिनियर साथीहरुले त्यस्तो भन्नुभएको छैन । पार्टी कुनै बेला कुन ठूलो, कुनै बेला कुन ठूलो हुन्छ । हिजो कुनै बेला माओवादी ठूलो थियो । हाललाई मतको हिसाबले एमाले ठूलो छ । तर, एमालेले प्राप्त गरेको मत र माओवादीले प्राप्त गरेको मत एकअर्कामा संयुक्त सहभागी भएकोले एकअर्कालाई मत हालेर दुईटैको मत यो रुपमा देखा परेका हुन् । यदि हामी अलग–अलग पार्टीको रुपमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुन्थ्यो भने यो परिणाम आउने सम्भावना पनि थिएन । त्यसो भएकोले हामीले एकअर्काको आवश्यकता गहिरो गरी बोध गरेका छौं । समान हैसियतको आधारमा एकताको टुंगो लगाउनुपर्छ ।
वैशाख ९ गते टुंग्याउने प्रस्ताव मात्रै हो कि ?
हामी ९ गते टुंग्याउँछौं । प्राविधिक, वैचारिकलगायत सबै तयारी हुँदैछ ।
पार्टी एकता हुने क्रममा ‘पोसिजन’ खोजिनुले एकतापछि गुटबन्दी अन्त्य नहुने सम्भावनाको विश्लेषण गरिएको छ ?
पार्टीभित्र बहस, छलफलहरु हुने गर्छन् । गुट होइन, वैचारिक पक्षधरता, छलफल, बहसहरु हुन सक्छन् । र, तिनीहरुलाई हिजोका सिद्धान्त, संगठनात्मक प्रणालीका आधारमा होइन कि अब नयाँ पार्टी निर्माण गरेर समाजवादी प्रणालीमा जनतालाई लिएर जाने उद्देश्यअनुरुपका बहस र छलफलमा ती कतिपय पक्षहरुलाई केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । गुटगुटै रहन्छन् भनेर पार्टी एकतामा भ्रम फैलाउने काम अहिले गर्नुहुँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको टुटफुट, विभाजनजस्ता विगतका नजीर आँकलन गर्दा एमाले, माओवादी केन्द्र लामो समय सँग रहन सक्दैनन् भनिरहेका छन् ?
बच्चा नजन्मिकन रोग लाग्छ भनेर नजन्माउने, बच्चै नजन्माउने र पालनपोषण नगर्ने भन्ने कुरा गरियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टी एकता गर्ने हो । सबै नेपालका वामपन्थीहरु टुटफुट र विभाजन भएका तीतो अनुभूति भएको पृष्ठभूमि छ । त्यसो हुनाले एउटा शक्तिशाली, जनताको नेतृत्व गर्नलायक, नेपालमा समाजवादी प्रणाली लागू गर्न सक्ने पार्टी आवश्यक भएको र जनमत पनि भएको हुँदाखेरी भोलि फुट्छ कि के गर्छ भनेर तर्क गर्ने बेला होइन । एकता गरेर जनताको नेतृत्व गर्ने गरी शक्तिशाली पार्टी बनाउन अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
खासमा पार्टीहरु सत्ता वा शक्तिमा जानेबेलामा विभाजित हुने गरेका छन् । अहिले एकता हुनै लागेका दलहरुबीच पनि सरकारको नेतृत्व आलोपालो रहेका छन्, यसले यो प्रक्रियामा अठ्यारा सिर्जना गर्दैन ?
आलोपालो सरकारको नेतृत्व भनेर अहिले नै अनावश्यक अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको मतलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । तर, कतिपय जिम्मेवारीहरुचाहिँ हेरफेर हुन सक्छ । त्यस अर्थमा यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरु मात्रै कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा आउला ?
जिम्मेवारहरु हेरफेर हुन सक्छ । स्थायी सरकारको प्रत्याभूतिका कारणले यो फेर्छौं, उ फेर्छौं अहिले भन्नुभन्दा पनि पाँच वर्षको स्थायी सरकार यही सरकारले सञ्चालन गर्छ भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ । जिम्मेवारीहरु सबै तहका फेरबदल हुन सक्छन् ।
कतिपय बेला यहाँहरुजस्ता जिम्मेवार नेताहरुबाटै पार्टी एकता हुन नदिने चलखेल भइरहेको भन्ने आवाज सुनिन्छ, त्यो आन्तरिक वा बाह्य ?
आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन् । नेपालका वामपन्थी नमिलुन् भन्नेमा ठूलै शक्तिकेन्द्र छ । तर, हामी आफैं प्रतिबद्ध भयौं भने कुनै पनि चलखेलले रोक्न सक्दैन । हाम्रो आन्तरिक कुरा नै प्रमुख हो, प्रधान हो । आन्तरिक रुपमा दुई पार्टीका महत्वपूर्ण कमिटीहरुमा एकता गर्ने कुरा टुंगो लगाइसकेकोले बाहिरी चलखेलले निर्णायक प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सरकार गठनको दुई महिना पुग्नै लाग्यो, सुरुआती कार्यशैलीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
अलि ढिलो भइराखेको छ । म गाउँबस्तीमा जनताका कुरा गुनासा सुनिरहेको छु । अलि तीव्र गतिमा, जनताले ग्रहण गर्ने गरी कामको प्रक्रिया सुरुआत होस् । सबै जनताका गाउँबस्तीहरुमा राज्यको पहुँच पुग्न नसके पनि जनताले सम्झिने कामको सुरुआत होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो र छ । अहिलेको मन्त्रिमण्डलले छिटोभन्दा छिटो जनताकै अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ र धेरै लिङगरिङ गर्नु हुँदैन ।
सरकारले काममा गति दिन नसक्नुको कारण के हो, तपाईको सुझाव ?
कतिपय नीति निर्माणका विषयहरु संविधानले नबोलेकोले सरकार अल्झिएको होला । अब छिटोभन्दा छिटा गर्ने कुराको निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्छ ।
केन्द्रीय सरकारको गति धिमा हुनु एकातिर छ भने प्रदेश सरकारका प्रमुखहरु पनि स्रोत, साधन अभाव भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् ?
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटका कतिपय विषयहरु मिलाउन बाँकी रहेकोले पनि अलमल छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मन्त्रीहरुको सुझाव लिएर छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता समस्याहरु पनि फुकाउने गरी काम गर्नुपर्छ । नीति निर्माणमा गाँठो फुकाउने हो भने सदनमा लगेर फुकाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अरु कतिपय कार्यकारी क्षेत्रबाट गाँठो फुकाउने हो भने संविधानअनुरुप गाँठो फुकाएर जानुपर्छ, ढिलो गर्नुहुँदैन ।
भनेपछि यी यावत् गतिविधि देख्दा दलहरुले निर्वाचन अघि घोषणा गरेको “सिंहदरबार गाउँगाउँमा” नारा कार्यान्वयन गर्न सहज रहनेछ ?
लागू गर्नलाई सहज छ । असहज हामीले महसुस गरेका छैनौं । अलिकति ढिलो भएको छ । जनताले अनुभूति गर्नेगरी, तीव्रगतिमा जनताका कामहरुको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारको कामको गति र कार्य अप्ठ्याराका बाबजुद देशको विकास, समृद्धि कत्तिको सम्भव देख्नुभएको छ ?
सरकार गठन गर्दैगर्दाको बेला भएकोले गति अतिधिमा छ । पाँच वर्षसम्ममा यस्तै गतिमा जानुहुँदैन । तीव्र गतिमा जानुपर्छ । नभए सरकार अदलीबदली भएर गरेर भएपछि जनताका कामहरु बामपन्थी गठबन्धनलाई जसरी विश्वास गरेर जसरी मत हाले त्यको कहीँ न कहीँ कार्यान्वयन हुने गरी, जनताका काममा सरकारको जवाफदेहिता, सक्रियता बढी हुनुपर्छ ।
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ? तपाईंको बुझाई के छ ?
संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएर होइन । मधेसमा केही समस्या आउँछ कि, संघीयतासम्बन्धी अलि बढी प्रश्नहरु उठेका थिए । त्यो पनि सहजतातिर सेटिङ हुँदै गएको छ । त्यसो भएकोले संघीयता कार्यान्वयनको होइन कि हाम्रो कार्यशैली र काम गर्ने तौलतरिका कतिपय पुराना, लेन्दी प्रक्रिया सच्याउने कुराहरुको समस्या हो ।
तर, मधेसकेन्द्रित दलहरु सरकारमा आउने भनिए पनि तपाईहरुले समेट्न सक्नुभएको छैन नि ?
यो सफल भएको छैन, अब हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट ल्याउने प्रयत्न अझै बाँकी रहन्छ । उहाँहरु आउनुहुन्छ र आउनुपर्छ ।